RPG - 2Game
Here you can download best RPG games. Android OS becomes more popular day after day and new developers appear which make really quality products. All content is totally free! Any mobile game can be included into several sections and have several features. Best RPG games for Android phones and tablets are added daily to our collection.
သူချင်း: ထာဝရတိုက်ပွဲများ (Fellow: Eternal Clash)
RPG | 24/05/2018
WhamBam စစ်သည်များ – ပဟေဠိ RPG (WhamBam Warriors – Puzzle RPG)
Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG)
RPG | 23/05/2018
Zilant အကြီးအကျယ်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျိုးဆက်သစ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ MMORPG ဖြစ်ပါတယ်။
နွယ်က M (Lineage M)
RPG | 18/05/2018
item တိုးမြှင့်, ပိုမိုစနစ်များ '' wear '' ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပုံစံဖျက်သိမ်း! ငါ့ကိုအားကောင်းစေရန်အသစ်စိန်ခေါ်မှု
ထောင်ထဲက Chronicle (Dungeon Chronicle)
"ထောင်ထဲက Chronicle" Diablo နဲ့မီးရှူးတိုင်အလင်းတူသောလက်ရာများ၏ဆင်တူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု RPG ဖြစ်ပါတယ်။
ပရမ်းပတာမာစတာမိုဘိုင်း (Chaos Masters Mobile)
RPG | 17/05/2018
ဇာတ်ကောင်တိုးတက်မှုနှင့်ပင်ကို real-time အွန်လိုင်း PVP ပျော်ရွှင်ခံစားပါ! လူအားလုံးတို့သည်ပျော်စရာတစ်ခု RPG အတွက်အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်း၏မဟာဗျူဟာ!
ဝင်္: အလင်း၏အရိပ် (Maze: Shadow Of Light)
သငျသညျနှစ်များတွင်မြင်ကြပြီအဘယ်အရာကိုမျှ! အသစ်လှုပ်ရှားမှု RPG ဝင်္: အလင်း၏အရိပ်။ ထူးခြားတဲ့လက်မှတ်က rendering စတိုင်နှင့်အတူပါဆုံးကိုစှဲလှုပ်ရှားမှု PRG!
Animus တစ်ယောက်တည်းရပ် (Animus Stand Alone)
Animus - သွေးမှတ်ဉာဏ် - တစ်ယောက်တည်း (IRE လုပ် SA Edition ကို) ရပ် IRE ဖို့အဖော်အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာနာမည်ကျော်ကိုရီးယားခရီးသွား "Chi Longcan" အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်က "ARPG + SLG" ၏ထူးခြားသောနှင့်ဆန်းသစ်ဂိမ်းထည့်သွင်း။ ဒါဟာ ARPG တိုက်ဖျက်ဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းချက်ချင်းအရေးယူထိန်းချုပ်မှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ဿုံရန်လိုဂိမ်း၏
Legacy of Atlantis: Beginning of Division
အကယ်စင်စစ် Atlantis ပြီးနောက်! ပျောက်အမှတ်တရများကိုရှာပါ! ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ Atlantis ဖို့လမ်းအဘယ်မှာရှိသနည်း
RPG | 16/05/2018
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ကမ္ဘာမြေအရင်းအမြစ်များကိုကြောင့်အရင်းအမြစ်များစွန့်ပစ်ရန်ကန့်ကွက်ခံထားရသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် unknowable အကြောင်းပြချက်များအတွက်, သညျလူသားတို့နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Grue The Monster
Monster Grue ကိုယ်ပျောက်နှင့်မဟာဗျူဟာပဟေဠိ၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလှည့်-based နည်းဗျူဟာ RPG roguelike ဖြစ်ပါတယ်။
Last Saver Zombie Hunter Master
ဒါကအားလုံးတခြားအလားတူထုတ်ကုန်ထက်မလွန်စေတဲ့ဖုတ်ကောင်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှောင်အရောင်တွေဖုတ်ကောင်ဝိုင်းရံဘို့အရေးတကွီးသဘောထားဖန်တီး! ယခုဖုတ်ကောင်အမဲလိုက်သွားပြီးမုဆိုးမာစတာဖြစ်!
M.A.D 8 - သင်ယူနိုက်တက်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များဆန့်ကျင်မစ်ရှင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သူရဲကောင်းများ၏ကစားသမားများနှင့်အရိပ် Tech မှလက်နက်များမှာထား၏ရှိရာတစ်ဦးကဒိုင်းနမစ်နှင့်ပြင်းထန်သောအသစ်သောလှုပ်ရှားမှု RPG ။
Transformers Arena – RPG Heroes
RPG | 15/06/2017
Transformers Arena is an addictive incremental RPG clicker game. You are reallyapart of Autobots battle to defeat Decepticon and control the way to fight with Optimus Prime, Bumblebee, Bulk Head, Magnus, Megatron ...
Spells of Genesis isafantasy trading card game that takes the collection and strategic aspects of trading card games and adds the addictiveness of arcade gameplay through its unique battling mechanic.
RPG | 13/06/2017
Kill demons and collect coins, upgrade your hero with new skill and ability! Become stronger to go futher!
RPG | 10/06/2017
A mobile RPG with engrossing PvP gameplay!
“Infinite alive” is an incremental action RPG game. It can be played even without network service.
Age of Warriors:Dragon Discord
RPG | 07/06/2017
“Welcome to the Elantra”,astrong werebear warrior looked at the dirty sword in your hand scornfully, obviously he could not understand the huge impact that you will bring to the whole Elantra world.
TRANG123 ... 8
ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ (Harry Potter: Hogwarts Mystery)
သံပလ္လင် (Iron Throne)
နဂါး Legend(DRAGON BALL LEGENDS)
အခမဲ့ Android / iOS ကိုဂိမ်း? APK ကို / IPA: အခုအစာရှောင်ခြင်း link ကိုအားဖြင့်အကောင်းဆုံး Download!
ထိပ်တန်းက Android / iOS ထုတ်ကုန်ယခုသင်စျေးကွက် Google ပေါ်တွင်မိုဘိုင်းဂိမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Play ရှာဖွေ App Store ကိုနိုငျသညျ, နေ့တိုင်းပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းသူတို့ထဲကအများစုဟာပို့လိုက်ကြတယ်ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်အနည်းငယ်အဆင့်ဆင့်လွန်သွားပြီးနောက်သင်အပြည့်အဝဗားရှင်းကိုဝယ်ဖို့ရှိသည်သငျ့သညျ။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်လည်းအကောင်းဆုံး Android / iOS ကိုဂိမ်းနဲ့အတူများစွာသောအခြားဆိုက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကိုအချို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့နှင့်သင့် gadgets များအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ En.2Game.Vn မှာကျနော်တို့က site ကိုမှထည့်သွင်းအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ဖိုင်တွေစမ်းသပ်ရန်, ဒါကြောင့်သင်စိတ်ပူရန်မလိုပါ - သင့် Device များပျက်စီးမည်မဟုတ်ပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Andriod / iOS ကိုစုစည်းအဆက်မပြတ် updated ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း app ကြော်ငြာ En.2Game.Vn စိတ်ဝင်စားနေလျှင်လမ်းဖြင့်သင်တို့ကိုလည်းကူညီပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲက Android / iOS အတွက်သာအများဆုံးစွဲလမ်းဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သငျသညျတော့ဘူးပျင်းမည်မဟုတ်ပါ: အပူတပြင်းပြိုင်ကားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ Hard-ပြုတ်အရေးယူသို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်သို့အာဏာရ။ ကြောင့်ခေတ်သစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏အစွမ်းထက်ကျန်တာတွေရန်, developer များကသင်၏လက်၌အမှန်တကယ်ကို virtual ကမ္ဘာဖန်တီးနိုင်!
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး: သင်ကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် hd ကို apps များကိုရှေးခယျြများအတွက် Android / iOS ကိုတက်ဘလက်, iPad အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါ။ သငျသညျနည်းပညာသစ်၏တန်ခိုးတန်ဖိုးထားဖို့နဲ့ဂိမ်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဗတ္တိဇံနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အခုအချိန်မှာမဆို Android / iOS ကိုဂိမ်းရယူပါ! အကောင်းဆုံး Android / iOS ကိုဂိမ်းများနှင့်ထိပ်ဆုံး 10 ကြည့်ရှုရန်ပဲလူကြိုက်အများဆုံးအားဖြင့်ဂိမ်း sort ။
အာရုံစူးစိုက်မှု, En.2Game.Vn မှာအားလုံးအကြောင်းအရာလွတ်လပ်စွာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်သတင်းအချက်လက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ချက်တင်ပြထားပါသည်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှာက Android / iOS အတွက်မဆိုဂိမ်းဒေါင်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သဘောတူသည်။